सिंहदरबारको करामद : आफु जिउदै आफ्नै हातमा मृत्यु दर्ता !
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले जिवितै रहेका एक दम्पतीलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र थमाएको पाइएको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का मनिराम खत्री र उनकी श्रीमतीलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बुझाइएको हो ।
अध्यक्ष थापाले आफुले हिजोमात्र जानकारी पाएको बताउँदै जिउँदै मान्छेलाई मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिइनु अक्ष्यम्य गल्ती भएको बताए । साभार : लोकान्तर